Mety hitombo ny fanafihana fiarovana amin'ny OS X amin'ny taona 2016 | Avy amin'ny mac aho
Ny fanafihana amin'ny iOS sy OS X dia mety hitombo amin'ny 2016
Orinasa fiarovana Symantec sy FireEye milaza 2016 manomboka ny fitomboan'ny isan'ny fanafihana atao amin'ny rafitra Apple. Amin'ny lafiny iray dia lozika izy io satria ny lazan'ny rafi-drakitra ireo dia manosika azy ireo hiova amin'ny rafitra "globalized" hafa toa ny Android na Windows.
Dick O'Brien, mpikaroka Symantec, dia manamafy izay nolazaiko, izany hoe, ny fitomboan'ny isan'ny fanafihana dia ao anatin'ny fitomboan'ny lazan'ny Apple fitaovana. Tamin'ity taona ity, ny isan'ny solosaina Mac voan'ny malware dia avo fito heny noho ny mandritra ny taona 2014 ary izany dia raha tsy raisintsika ny kaontim-panisana natao tamin'ny volana septambra.
Na izany aza, tsy tokony hanahirana loatra ireo mpampiasa, toy ny ambany kokoa ny isan'ny fanafihana noho ilay nitranga ohatra tao amin'ny rafitra Windows ary araka ny lazain'i O'Brien tenany:
Aza manaitra […] Apple dia mbola sehatra azo antoka ihany, fa ny mpampiasa kosa tsy afaka mionona amin'ny fandriam-pahalemana toy ny taloha intsony satria mihabe ny isan'ny aretina sy ny fandrahonana vaovao.
Amin'ny lafiny rafitra finday, 96 isan-jaton'ny malware Izy io dia kendrena amin'ny fitaovana Android. Na izany aza, i Bryce Boland, CTO ao amin'ny FireEye, dia nilaza ny ahiahin'i Symantec, milaza fa mihabetsaka ny mpanafika no:
Mitady fomba hamakiana ny rindrin'i Apple izy ireo, amin'ny taona ho avy dia hitombo haingana ny fanafihana
Nasongadin'ireo orinasa roa ireo fa ny Apple Pay no mety ho sehatra anaovana azy hifantoka amin'ny ankamaroan'ny fanafihana, na dia eken'izy ireo aza fa mbola tsy nisy izany fanafihana fiarovana ny rafitra ataovy mahomby amin'ity serivisy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fanafihana amin'ny iOS sy OS X dia mety hitombo amin'ny 2016
Raha ny hevitro amin'ny maha Mpanolotsaina ahy dia tokony manomboka manao zavatra i Apple mba hisorohana ny dokambarotra ao amin'ny OS X, efa hitako fa tranga maro no voafitaka ny olona noho izany ary azoko antoka fa tsy mila antso toa ireo izay dan ao amin'ny Microsoft i Apple.
Steve Jobs Movie Nahazo fanolorana anarana Golden Globe marobe
Apple manome headphones ho an'ny mpiasa ary manova ny politikam-piverenana, Samsung dia manomana fampiharana ho an'ny Apple Watch, loza mitatao amin'ny baomba ao amin'ny Apple Store ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho